Ady amin’ny Terôrisma : Nahazo fitaovana raitra tamin’ny Sinoa i Madagasikara -
AccueilRaharaham-pirenenaAdy amin’ny Terôrisma : Nahazo fitaovana raitra tamin’ny Sinoa i Madagasikara
25/04/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ho fanamafisana ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana, nisy ny fampitaovana ny tafika malagasy. Tontosa, omaly mantsy ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena (MDN) sy ny masoivohon’i Chine tamin’ny fifanarahana tamin’ny fampitaovana an’i Madagasikara ara-tafika.
Tamin’izany indrindra no nanolorana ireo fitaovana raitra natokana ho amin’ny ady amin’ny Terôrisma eto amintsika. Anisan’ny fitaovana raitra azon’i Madagasikara tamin’ity fifanarahana nanaovan’ny roa tonta sonia ity ny fitaovana manokana famantarana ny fisian’ny baomba, sns.
Raha ny fampitam-baovao, vonona ny hanampy antsika sy hampitaovana antsika ny governemanta sinoa. Araka izany, hisy ny fifanohanana sy fiaraha-miasan’ny firenena roa tonta tsy eo amin’ny lafiny ara-tafika ihany fa eo amin’ny lafiny ara-toekarena, sosialy, sns.
Ankoatra izay, anisan’ny nivoitra tamin’ny fifanaovan-tsonia ihany koa ny fanamafisana ny fiarovana ny sisin-dranomasin’i Madagasikara. Marihina fa efa nahazo sambo haingam-pandeha roa avy tamin’ny Amerikanina ihany koa isika hiarovana ny sisin-dranomasina. Tsy mijanona hatreo anefa izany, satria mbola ho maro ireo fitaovana ho azontsika avy amin’ny governemanta Sinoa.
Nomarihin’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, Béni-Xavier Rasolofonirina fa fototra iaingan’ny fiarovam-pirenena ny fampitaovana ahafaha-manatanteraka ny asa amin’ny ady amin’ny fampihorohoroana. Voalaza ihany koa fa fototra iray hisian’ny fampandrosoana ny firenena ihany koa ny fandriam-pahalemana.
Ankoatra izay, mbola tsy voaresaka kosa ny mikasika ny fampiofanana eo amin’ny samy ara-tafika eo amin’ny firenena roa tonta.
Filoha Hery Rajaonarimampianina : “Mahatsapa ny olana atrehinareo tanora aho”